Global Voices teny Malagasy » I ‘Neny Gaia’, Hosodoko Nataonà Maleziana Mpanakanto Mba Hiantsoana Fiarovana ny Tontolo Iainana Sy Ny Zon’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
I ‘Neny Gaia’, Hosodoko Nataonà Maleziana Mpanakanto Mba Hiantsoana Fiarovana ny Tontolo Iainana Sy Ny Zon'ny Vehivavy
Voadika ny 10 Oktobra 2017 5:15 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Ny Haravoam-panahy – Loko Menaka sy Plastika amin'ny Hosodoko – mirefy 24×36 inches. Fizakàmanana: Jennifer Mourin, 22 May 2017. Nahazoana alàlana
Fampirantiana iray vaovao ao Penang, Malezia no manasongadina ireo hosodoko farany indrindra nataon'i Jennifer Mourin, mpanakanto iray fantatra amin'ny fahavitrihany mampiroborobo  ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny zavakanto.
“i Neny GAIA” no lohahevitry ny andiany vaovao noforonin'i Mourin izay noforoniny taorian'ny namakiany ireo tatitra  mampitebiteby momba ny toetry ny tontolo iainana. Ao anatin'ny tantara Grika fahagola, Gaia dia fantatra amin'ny maha-Andriambavin'ny Tany azy.
Tanaty antsafa iray nifanaovany tamin'ny Global Voices, nohazavain'i Mourin ny aingam-panahy nanosìka azy hanao ireo hosodoko vaovaony ireo:
Fonosin'ity andiany nataoko hoe “i Neny Gaia” ity ny filàna manao tombana momba izay nataontsika sorona noho ny tsy fahalalàna onona, ny fitiavantena, ny fanjifàna tafahoatra ary ilay antsoina hoe firoboroboana ara-toekarena. Ireto hosodoko vaovao ireto dia milaza ny filàna manaja, mikajy ary miaro ny planetantsika sy ny tarany mba tsy hiharan'ny fanararaotana, fitrandrahana tafahoatra, fanaovana tantely afa-drakotra ary ny fahafatesana. Ny fanomezako endrika olona an'i Neny Tany ho ao anatin'ireo vehivavy ataoko sary hosodoko voahodidin'ireo bibidia tandindonim-paharingànana dia mibanjina ny olona any anaty masony miantso azy ireo hiova, hampitsahatra ny famonoana!
Anatin'ny Finoana – Loko Menaka sy Plastika amin'ny Hosodoko – mirefy 24×36 inches. Fizakàmanana: Jennifer Mourin, 14 Sept 2017. Nahazoana alàlana
Notsongain'i Mourin ihany koa ny sasany amin'ireo bibidia tandindonim-paharinganana ao Malezia, izay asongadiny ao anatin'ireo hosodokony. Nomarihany ao ny Tigra Maleziana (Harimau Malaya) izay marika nahazatra hatrizay ho famantarana an'i Malezia, saingy mety ho fongana atsy ho atsy:
Hitako ho somary maneso ny hoe ity bibidia mirenty ity no marika nahazatra namantarana an'i Malezia mipetaka eny amin'ireo saina kely Maleziana, no anaran'ny ekipam-pirenentsika mpilalao baolina kitra (Harimau Malaysia), no hajaina fatratra ho toy ny isan'izay maha-izy azy ny Maleziana, saingy ilay tena biby velona dia andalam-panjavonana! Miha-fongana ilay tigra tsara tarehy noho ny fihazàn'ny olombelona azy, ny famonoany ary ny famarotany ny hodiny, ny nifiny, ny henany any amin'ny finoana sasany mamitaka hoe ireny dia hanome hery sy hikolokolo ny filàna ara-nofo, indrindra fa ho an'ny lehilahy – sorona noho ny hambo adaladala, ny fireharehana ary ny fitiavantena.
Tahàka izay ihany, asongadiko ihany koa ny Hornbill. Tsaroako mamerovero faratra ireo vorona tsara tarehy tamin'ny andron'ny fahazazàko, fony fianakaviako nonina tany amin'ny fanjakan'ny Pahang, ary nahazatra azy ireny ny nanidintsidina tamin-kalalahana teny akaikin'ny tranoko. 10 no karazana hombrills ananan'i Malezia, ary mila arovana izy ireny!
Ilay Mistery – Loko Menaka sy Plastika amin'ny Hosodoko – mirefy 20×20 inches. Fizakàmanana: Jennifer Mourin, 13 Aprily 2017. Nahazoana alàlana
Omen'i Mourin voninahitra ihany koa ireo vehivavy misalotra ‘sarong’, lamba fitafin'ireo vazimba teratany manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana:
Ireo fahatsiarovana ny vohitra Thai nisy ny reniko tany aminny fanjakana atsinanana ao Kelantan no namadika ny fitiavako ny ‘sarong’ tinafin'ireo vehivavy matanjaka (isan'ireny ny reniko, ny renibeko ary ireo mponina tao am-bohitra) ho lasa sary famantarana ny maha-mpanakanto ahy.
Ny Tsiaro – Loko Menaka sy Plastika amin'ny Hosodoko – mirefy 24×24 inches. Fizakàmanana: Jennifer Mourin, 22 Aprily 2017. Nahazoana alàlana
Amin'ny maha-mpanakanto azy, ahafantarana an'i Mourin ihany koa ny fisoloany vava ny zon'ireo vehivavy. Mibaribary io ao anatin'ilay andiany vaovao nataony:
Lohahevitra iray miverimberina ny fampinonoan'ny vehivavy, satria tsy mety takatro mihitsy ny antony iheveran'ny fiarahamonina ny fihetsika iray feno fitiavana, manome sakafo ary manabe toy ny fampinonoan'ny vehivavy ho tahàka ny fihetsika iray ‘maharikoriko’. Mendrika tohanana sy tiavina ny reny. Ao anatin'ireo andiany “Neny GAIA”, entina maneho ny fomba fameloman'i Neny Tany antsika, famahanany sy fanomezany antsika izay ilaintsika, ny fampinonoana.
Ary farany, niantso ny hanaovana hetsika malaky i Mourin mba hampitsaharana ny fanimbàna ny planeta.
Mila tsaroan'ny olona ireo zavatra maro omen'i Neny GAIA mba hahafahan'ny rehetra mivelona sy mahazo izay ilainy! Dia mampanontany tena ve rehefa mihetsika izy hanohitra ny hambo diso toeran'ny zanak'olombelona, ny tsy firaharahiana sy ny fitiavantena? Anaty sambo iray ihany isika rehetra, ary raha tohizan'ny zanak'olombelona izao ataony hitan'ny masontsika izao, dia ny antsika no be indrindra!
Anaty Fankasitrahana – Loko Menaka sy Plastika amin'ny Hosodoko – mirefy 36×24 inches. Fizakàmanana: Jennifer Mourin, 8 Sept 2017. Nahazoana alàlana
Ampahany amin'ilay fampirantiana iraisana atao ao amin'ny Hin Bus Depot Art Centre any Penang, Malezia ireo hosodokon'i Mourin.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/10/108384/
 fampirantiana : http://anilnetto.com/society/arts-and-culture/art-periphery-antidote-materialistic-capitalism/